I-Guangzhou Weipu mechanical and Electrical Co., Ltd. igxile ekukhiqizeni amadivayisi wokuxhuma ezimbonini. Okuhlangenwe nakho okunothile okuqongelelwe eminyakeni edlule kwenze iWeipu yaba ibhizinisi elivelele emkhakheni wezinto zikagesi eChina. Ngasikhathi sinye, uWeipu ubuye abe yilungu le ...
Umkhakha wocingo nentambo imboni ebalulekile esekelayo ekwakhiweni komnotho waseChina. Inikezela ngengqalasizinda embonini yamandla nezimboni zokuxhumana, kubalwa ikota yenani lokukhipha kwemboni kagesi yaseChina. Yimboni yesibili ngobukhulu e ...
Ethintwe ukuthuthukiswa kwamandla okuphelele kwemboni ye-LED yasekhaya kanye nomthelela omuhle wezinqubomgomo zikahulumeni, imboni ye-LED yaseChina iqhubekile nokufudumala eminyakeni yamuva, ekhombisa ukuthambekela okuhle ngobuningi nekhwalithi. Ezinye izinhlangano zezimboni zibikezela ukuthi iChina̵ ...
Isokhethi elingenamanzi yipulagi elinokusebenza okungangenwa manzi, futhi linganikeza ukuxhumana okuphephile nokwethembekile kukagesi, isiginali, njll. Isibonelo: Isibani semigwaqo ye-LED, ukunikezwa kwamandla okushayela i-LED, isikrini sokubonisa i-LED, i-lighthouse, umkhumbi we-cruise, imishini yezimboni, imishini yokuxhumana, ukutholakala ...
Isokhethi elingangeni manzi liyipulagi elinamanzi angenawo amanzi, futhi linganikeza ukuxhumana okuphephile nokwethembekile kukagesi nezimpawu. Isibonelo: amalambu emigwaqo e-LED, amandla we-LED drive, izikrini zokubonisa ze-LED, izibani zokukhanya, imikhumbi ye-cruise, imishini yezimboni, imishini yezokuxhumana, abasebenza ukuthola ...